12th December 2018, 07:24 pm | २६ मंसिर २०७५
उमेश श्रेष्ठ/स्वेच्छा राउत -
‘निर्मलाको हत्या १०० प्रतिशत बम कै घरमा भएको हो।'
एउटा युट्युब भिडियोको कमेन्टमा उनले लेखेका छन्, ‘म अहिले देशबाहिर छु। मैले पहिलेदेखि निर्मला पन्तको हरेक भिडियो नटुटाई हेर्ने गरेको छु। सात समुद्र पारीबाट मैले हरेक भिडियोको आधारमा सूक्ष्म रुपले अध्ययन गर्दा म पुलिस नभए पनि मैले धक्कु दिँदै आएको छु कि निर्मला पन्तको हत्या बम दिदीबहिनीकै घरमा भएको थियो।'
उनले सो कमेन्टमा आफ्नो आक्रोश यसरी पोखेका छन्- ‘तर नेपालमै रहेको त्यत्रो पुलिस फोर्सले खै पत्ता लगाउन सकेको? थुक्क नेपालको पुलिस प्रशासन निकम्मा।'
यो कमेन्ट नौलो आवाज नामक युट्युब च्यानलको भिडियोमा आएको हो। निर्मला पन्तसँग जोडिएको विभिन्न विषयलाई यसले भ्रमपूर्ण हेडलाइन र थम्बनेल दिएर राखेको छ। तीमध्ये एउटा भिडियोको शीर्षक छ, ‘निर्मला पन्तको हत्या बम दिदीबहिनीकै घरमा भएको खुलासा - लाश लिन ४ बजे टेम्पो आएको’ । थम्बनेलमा रातो रङको टेम्पोको समेत फोटो छ।
यही भिडियोमा आएका कमेन्टहरुले प्रष्ट पार्छन्, कसरी आम दर्शकलाई घटनाबारे गलत जानकारी दिन र हिट्स बटुल्न सम्भव छ भन्ने। दुई लाख ३० हजार हिट्स पाइसकेको भिडियोमा भीम विकले लेखेका छन्- ‘एसपी दिल्ली विष्टलाई जिउँदै जलाउनु पर्छ।'
‘नेपाली मन’ नामबाट अर्को कमेन्टमा भनिएको छ- ‘सबै प्रमाण भएर पनि के घन्टाको भाषण गरेर बसेको? गएर समात न बम दिदीबहिनीलाई अनि दिल्लीराज विष्टलाई। बाँधेर चुट्दै तीनै जनालाई जिउँदै आगो लगाएर जलाउनु पर्छ, अनिमात्र निर्मला बहिनीको आत्माले शान्ति पाउँछ।'
'खुलासा' र 'रहस्य खुल्यो'
बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण चर्चामा आएसँगै निर्मला शब्दमा युट्युबरको आकर्षण बढेको छ। उनीहरुलाई सत्य र तथ्यसँग केही मतलब छैन। ‘निर्मला’ शब्द जोडिएसँगै आउने 'भ्युज' यसको कारण हो। निर्मलाकै नाम जोडेर शीर्षक राखिएका भिडियोहरु अधिकांश ट्रेन्डिङमा आए। धेरैले हेरेपछि ट्रेन्डिङ सूचीमा आउँछ।
विराटनगर अनलाइन टिभीले ‘बाहिरियो यस्तो रहस्य - निर्मला पन्तलाई बलात्कारपछि झुण्डाएर मारेको खुलासा’ शीर्षक राखेर अपलोड गरेको भिडियोमा उनको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट झुटो भएको ठहर गरिएको छ। तर, भिडियो हेर्दा भने ‘रिपोर्ट झुटो हुनसक्ने अनुमान’ मात्र छ। ‘हुन सक्छ’ र ‘अनुमान’को भरमा निस्कर्षसमेत तयार पारिएको भिडियो रिपोर्ट ३ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
श्यामनारायण चौधरीले लेखेका छन्- ‘च्याउ उम्रे झैं उम्रेका युट्युबेहरु निर्मलाको हत्यामा तिमीहरु पैसा झोला भरी कमाऊ, तर यदि साँचो समाचारदाता हौ भने साँचो समाचार मात्र निकाल।'
निर्मला जोडिएपछि जस्तो भिडियोको पनि भ्युज बढ्ने हुनाले युट्युबरहरुले 'आत्मा', 'ज्योतिषको भविष्यवाणी' भन्दै भिडियो बनाएका छन्।
‘निर्मला पन्तको आत्मा बोल्यो, यसरी बलात्कारीको नामै तोक्यो’ शीर्षकमा भ्वाइस अफ नेपाल नाम गरेको च्यानलले राखेको भिडियोमा दुबईबाट सबिता केसी भन्छिन्- 'म आज निर्मलाको आत्मा बनेर आएकी छु।' केहीबेर निर्मलाको हत्याबारे भूमिका बाँध्छिन् र कविता वाचन गर्न थाल्छिन्, जसमा बम दिदी बहिनीको घरमा के- के भएको थियो भन्ने घटना विवरण आफ्नै आँखाले देखे जसरी गरिएको छ।
त्यही कवितालाई ‘निर्मला पन्तको आत्माको व्यथा अहिलेसम्म भौँतारिँदै छ’ शीर्षक दिएर समेत राखिएको छ। यो भिडियोको थम्बनेलमा त निर्मलाको फोटोलाई फोटोसप गरी डरलाग्दो बनाइएको छ। कन्टेन्टमा पनि पटकपटक 'हरर फिल्म'को फुटेज र डरलाग्दा फोटाहरु देखाइन्छ।
युट्युबमा यस्तै सामाग्रीहरु चर्चामा रहँदा सांगीतिक रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’मा तेजेन्द्र गन्धर्वले ‘घटना’ बोलको गीत गाए। गीतमा उनले निर्मला पन्त तथा उनको बलात्कार र हत्याकाण्डबारे जानकारी दिए। गायक तथा कार्यक्रमको 'कोच' रहेका प्रमोद खरेलले शब्द दिएको उक्त गीतले पनि केही बेरमै पब्लिक सेन्टिमेन्ट छोयो। फेसबुक, ट्विटरमा भाइरल भयो।
'सनसनीपूर्ण र गलत शीर्षक र जानकारी सम्प्रेषण गर्नेहरुले कसैको पनि मानहानी गर्न समय र मेहनत खर्चेका होइनन्। उनीहरुको लोभ नै पैसा कमाउने हो’, युट्युबमा ठूलोपर्दा टिभी सञ्चालन गर्ने जीवन पराजुली भन्छन्, 'त्यस्ताले गर्दा हामीलाई पनि आम मान्छेले गलत तरिकाले हेर्न थालिसकेका छन्।'
युट्युबको दुरुपयोग नेपालमा मात्र हैन, अन्य देशमा पनि भइरहेको छ। नेपालमा यसबारे बृहत् अध्ययन हुनु बाँकी नै छ। तर, सन् २०१३ मा एउटा जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनको निचोड छ - युट्युब मेडिकल सूचनाका लागि भरपर्दो स्रोत हैन। अध्ययनले उपलब्ध २७ प्रतिशत भिडियोले भ्रामक र खतरनाक सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेको देखाएको थियो भने ५५ प्रतिशत भिडियोमा भने कुनै तथ्य र आवश्यक जानकारी नभएको देखिएको थियो।
युट्युबका भिडियोहरुले बम दिदीबहिनीलाई दोषी र लाश लिन टेम्पो आएको कुरालाई सत्यका रुपमा स्थापित गरेको उदाहरण सात समुद्रपारीबाट ‘निर्मलाको हत्या १०० प्रतिशत बम कै घरमा भएको हो' भनी ठोकुवा गर्ने कर्ण गुरुङबाट लिन सकिन्छ।